मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारलाई खुशीको खबर दिए ? - Tree Media News
मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारलाई खुशीको खबर दिए ?
tmednewsPosted on २० जेष्ठ २०७५, आईतवार
क्वालालम्पुर, २0 जेठ
मलेसिया सरकारले आफ्नो मुलुकमा रहेका गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई अगष्ट ३0 भित्रै स्वदेश फर्कन आग्रह गरेको छ । मलेसियाली गृह मन्त्रालयले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरकानुनी आप्रवासी कामदार फर्कने अन्तिम समय अगष्ट ३0 रहेको उल्लेख गरेको हो । उक्त अवधिभित्रै आफ्नो देश नफर्किए त्यस्ता कामदार र उनीहरूलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता कम्पनीलाई दण्डित गरिने जनाइएको छ । गतवर्ष फेब्रुअरी १६ देखि त्यस्ता कामदारका लागि वैधानिकता प्रक्रियामा सामेल भइ अस्थायी श्रम अनुमति लिएर काम गर्न या अध्यागमन कार्यालयमा तोकिएको जरिबाना रकम तिरेर स्वदेश फर्कन पाउने (थ्री प्लस वान भोलुन्टारिली प्रोग्रामअन्तर्गत) दोहोरो अवसर दिएको थियो । गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई अघिल्लो वर्ष अक्टोबर १0 देखि डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि समयावधि दिएकोमा यो वर्ष जनवरीदेखि जुन ३0 सम्मकालागि समयावधि थपेको थियो ।
विज्ञप्तिमा गैरकानुनी आप्रवासी कामदार वैधानिक हुन दिइएको ‘रिहाइरिङ’ कार्यक्रमको समयसीमा अब नथपिने उल्लेख छ । थप कडाईको संकेत सरकारले दिएको अवसरको बेवास्ता गर्ने कामदार र कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन नगरि गैरकानुनी कामदारलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता दुवैलाई दण्डित गरिने जनाएको छ । गैरकानुनी आप्रवासी कामदारविरूद्ध थप कडाई गर्ने संकेत गरेको हो । गत महिना नयाँ सरकार गठन भएसँगै मलेसियाले आप्रवासी कामदारको निर्भरता घटाउने जनाउँदै आएको थियो । अवैधानिक आप्रवासी कामदारहरू हटाउन यसअघि विभिन्न चरणमा आममाफी, वैधता कार्यक्रम र फिर्ती कार्यक्रम लगायतका थुप्रै अवसरहरू दिइसकेको छ । नेपाली दूताबासका अनुसार गतवर्ष झण्डै १६ हजार अवैधानिक नेपाली कामदार स्वदेश फर्किएका थिए । मलेसियाली सरकारले दिएको उक्त कार्यक्रमको मौका छोप्दै उनीहरू स्वदेश फर्केका थिए ।
सरकारले ‘माईईजी सर्भिसेज वर्हाड’ लगायत विभिन्न ८ कम्पनीहरूले मलेसियाली अध्यागमन विभागसँग सहजीकरण गरी गैरकानुनी कामदारलाई घर फर्काउन सरकारी अनुमति पाएका थिए । पूर्व सरकारले यस सम्बन्धमा विभिन्न कम्पनीहरूसँग गरेको सम्झौता पनि समाप्त हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यात्रा अनुमतिपत्र लिनेको भीड हाल समेत जारी ‘थ्री प्लस वान भोलुन्टारिली प्रोग्राम’ अन्तर्गत दैनिक सय जनाको हाराहारीमा नेपालीहरू स्वदेश फिर्तीका लागि यात्रा अनुमतिपत्र लिन दूताबास पुग्ने गरेका छन् ।
यात्रा अनुमतिपत्र लिएपछि उनीहरू आउटपासका लागि अध्यागमन विभागमा जानुपर्ने हुन्छ। सहजीकरणका लागि सरकारी मान्यता पाएका कम्पनीका प्रतिनिधिको सहारामा उनीहरू आउटपास लिन अध्यगागमन विभागको कार्यालयसम्म पुग्छन् । झण्डै २0 लाखभन्दा आप्रवासी कामदार वैधानिक रूपमा कार्यरत् रहेको बताइने मलेसियामा अझै लाखौं कामदारहरू अवैधानिक अवस्थामा कार्यरत् हुनसक्ने अनुमान छ । यहाँ झण्डै ५ लाख नेपाली वैधानिक रूपमा कार्यरत् रहेका र हजारौं नेपाली अवैधानिक अवस्थामा कार्यरत् रहेको हुनसक्ने ठानिएको छ । सरकारी आँकडाअनुसार गत महिना मे २८ सम्ममा कुल ८३ हजार ९ सय १९ रोजगारदाता कम्पनीसँग सम्बद्ध कुल ७ लाख ४४ हजार ९ सय ४२ जना आप्रवासी कामदारले अस्थायी श्रम अनुमतिका लागि दर्ता भएका छन् । तीमध्ये हजारौं नेपाली छन् । ती निर्माण, उत्पादन, कृषि, सेवा लगायत क्षेत्रमा काम गर्न श्रम अनुमतिका लागि दर्ता भएका हुन् ।
Previous Postआनाको १० लाख भनेको जग्गा ७ दिन मात्र भयो ६ लाख आनामा लिनुभन्दा पनि मान्छेले लिन छोडिसकेPrevious Post
Next Postसहकारी र माइक्रोफाइनान्स बीच के फरक छ ? अत्यावश्यकीय जानकारीNext Post